Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Novambra 2020 à 18:40
26 998 octets ajoutés , il y a 2 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Oktobra 2020 à 07:07 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Novambra 2020 à 18:40 (hanova) (esory)
k (Tantaran'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô)
Ny '''Repoblika Demokratikan'i Kôngô''' dia firenena ao amin'ny faritr'i [[Afrika Afovoany|Afrika afovoany]]. Izy no firenena ao Afrika ngeza indrindra eo aorian'i [[Sodàna]] sy i [[Aljeria]] ; izy koa no firenena ngeza indrindra sy be mponina indrindra ao amin'ny faritr'i Afrika afovoany. Ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô no firenena be olona indrindra ao amin'ny fikambanan'ny firenena miteny frantsay eo alohan'i [[Frantsa]]. Iantsoana azy koa ny hoe '''''Kôngô-Kinshasa''''' mba tsy hifangaroany amin'i [[Kôngô-Brazzaville]]. I Kinshasa no renivohiny, avy eo no niavian'ilay anarana hoe Kôngô-Kinshasa. I [[Zaira]] koa no anaran'io firenena io tamin'ny [] hatramin'i [], teo izy niova ''Repoblika Demôkratikan'i Kôngô''.
Ny '''t'''antaran' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô dia voamariky ny fisian' ny fisian'ny fanjakana maro madinidinika tany aloha, ny fahatongavan' ny Eorôpeana, ny fivarotana andevo, ny fanjanahan-tany belza, ny fahaleovan-tena, ny ady an-trano, ny fanonganam-panjakana, ny fitsabahan' ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
=== Tahohan’ny fanjanahan-tany ===
Efa nisy olona ity faritra ity tamin'ny 200 000 taona tal. J.K. Ny lemaka midadasika kôngôley tamin’ izany fotoana izany dia rakotry ny ala tsy nisy nanimba. Tany amin’ ny taonarivo faharoa dia nisy mpamboly [[banto]], avy any amin' ny faritra eo anelanelan' ny tapany atsinanan' i [[Nizeria]] sy ny Grassfields any [[Kamerona]], hatramin'ny 2600 tal. J.K., niditra tao amin’ io faritra io ka niorim-ponenana amin’ ny morontsiraka sy teny amin’ ny lembalemba atsinanana sy atsimo, ka teny izy ireo no nanangana fiarahamonina tarihin’ ny lehibem-poko.
==== Fiitaran' ny fanjaka-mpanjaka ====
Rehefa tonga tamin’ ny tampon’ ny heriny ny fanjaka-mpanjaka dia niitatra mankany amin’ ny faritra misy an’ i Angôla sy Gabôna ankehitriny. Tamin’ ny taona 1489 dia nisy masoivohon’ i Kôngô (''Kongo'') namangy ny mpanjakan’ i [[Pôrtogaly]], ary tamin’ ny taona 1490 dia nisy misionera fransiskana sy mpanao taozavatra pôrtogey niorim-ponenana tao amin’ io faritra io. Tonga koa ny [[Zezoita]] ka nampiova ho amin' ny [[fivavahana kristiana]] ny mpanjaka sy ny vahoakan' ny fanjkakan' i Kôngô. Nihalefy hery, avy eo rava anefa izany fanjakana izany, ary nitodi-doha tany [[Angôla]], izay tsy dia nahitana fanoherana ny fivarotana andevo, ny Pôrtogey.
==== Ny faharavan'ny Empira Londa ====
Tamin’ ny taonjato faha-16, ireo Loba (''Luba'') dia nanorina ny Empira Londa (''Lunda'') tao atsimo, izay niroborobo vokatry ny fandrosoan’ ny raharaham-barotra teo anelanelan’ ny [[ranomasimbe Atlantika]] sy [[Ranomasimbe Indiana|Indiana]]. Nizarazara ho fanjaka-mpanjaka maro izany Empira izany tamin’ ny taonjato faha-17. Ny [[fivarotana andevo mainty hoditra]] dia niely tao amin’ ny faritra Bas Kasaï sy tany Katanga. Tamin’ ny taonjato faha-19 dia nandroso indrindra ny fivarotana olona tao amin’ ny faritra avaratra. Ny fidiran’ ny Eorôpeana tao dia efa taty aoriana, nitoetra tany amin’ny morontsiraka hatrany mantsy ny Eorôpeana.
==== Fahazoan’ i Stanley fahefana feno tao Congo ====
Tamin’ ny taona 1874 hatramin’ ny 1877 dia nizaha ny onin’ i Congo ilay mpijery tany britanika atao hoe Henry Morton Stanley. Nanorina ny ''Association internationale africaine'' (AIA) tamin’ ny taona 1876 ny mpanjakan’ ny Belza atao hoe [[Leopold II, mpanjakan'i Belzika|Léopold II]]. Niady tamin' ny fanandevozana ity fikambanana ity sady nanan-tanjona momba ny fikarohana ara-tsiansa. Nifanaraka tamin'ny tompon-tany i Stanley mba hahafahany mahazo tany sy mitrandraka ny haren' ilay faritra. Nanorina tobim-barotra maro i Stanley, ka isan’ izany i Stanleyville sy i Léopoldville.
=== Ny fanjanahan-tany belza ===
==== Ny Fanjakana Mahaleotenan' i Congo ====
Nisy ny fanjakana, isan’ izany i [[Frantsa]] sy i [[Pôrtogaly]], izay nilaza ho manana tany tao amin’ io faritra io, ka ny fivoriam-be natao tao [[Berlin]] tamin’ ny taona 1885 no nanaiky ny maha masi-mandidy ny mpanjaka [[Leopold II, mpanjakan'i Belzika|Léopold II]] amin’ ny ampahany be amin’ ny lemaka tondrahan’i Congo sy ny faritra ivoahan’ ity ony ity any amin’ ny ranomasina.
Nanao ampihi-mamba ny fivarotana [[fingotra]] sy vangin’ elefanta ilay Fanjakana Afak’ i Congo (''Etat libre du Congo''). Nandroso ny fitaterana entana amin’ ny alalan’ ny filanjana. Tamin’ ny taona 1897 dia nampidirina tao amin’ io faritra io ny [[asa an-tery vozona]]. Izany fanararaotana izany, sy ny taham-pahafatesana mbony nateraky ny filanjana entana, dia nampihetsi-po ny mpanara-baovao, ka nisy ny fampielezan-kevitra avy ao amin’ ny [[Fanjakana Mitambatra]] ([[Britaina Lehibe]]) izay nanameloka izany fanararaotana nataon’ ny fitondran’ i Léopold II izany.
==== Fananan’ i Belzika ====
Tamin’ ny taona 1908 dia lanin’ ny Antenimiera belza ny hampiankina ny Fanjakana Afak’ i Congo tamin’ ny mpanjakan’ ny Belza, ka nanjary fananan’ i Belzika amin’ izay izany tany izany. Nandritra ny [[Ady Lehibe Voalohany]] dia niady niaraka tamin’ ny Miaramila mitambatra (''Alliés'') ny andian-tafika kôngôley ka nahazo ny ampahany amin’ ny faritr’ i Tanganyika (i [[Tanzania]] ankehitriny) sy nahazo koa an’ i [[Roanda-Orondy]] (''Ruanda-Urundi''), tany fehezin’ ny [[Alemaina|Alemàna]], izay napetraka eo ambany fitantantan’ i Belzika araka ny alalana nomen’ ny Fikambanan’ ny Firenena (''Société des Nations'') tamin’ ny taona 1919.
=== Fitakiana fahaleovan-tena ===
==== Fitakiana fahaleovan-tena ====
Tamin’ ny taona 1955, raha nitombo ny fitakiana fahaleovana nataon’ ny ''Association des Bakongos'' (Abako) naorin’ i [[Joseph Kasavubu]] dimy taona tany aloha, sy ny ''Conscience africaine'' izay naorina tamin’ ny taona 1951, dia nivoy ny amin’ ny atao hoe “Fianakaviambe belgô-kôngôley” (''Communauté belgo-congolaise'') i Baudouin I. Nandroso paikady hanomanana olomanga kôngôley amin’ ny asan’ ny fanaovan-draharaham-panjakana ny governemanta belza.
==== Tsy fifanarahan’ ny mpitaky fahaleovan-tena ====
Taorian’ ny fandrarana ny fivorian’ ny ''Association des Bakongos'' dia nisy fihetsiketsehana nipoaka tao Léopoldville tamin’ ny volana Janoary 1959, nanambara ny hanaovana fifidianana an-toerana ny governemanta belza. Nitombo ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ ireo fikambanana ara-pôlitika, ka ny sasany, toa ny ''Mouvement national congolais'' (MNC) notarihin’ i [[Patrice Lumumba]], dia nankasitraka ny hisian’ ny lalàm-panorenana mandala ny fanjakana federaly, ny hafa kosa, toa ny ''Association des Bakongos'' (Abako) izay notarihin’ i [[Joseph Kasavubu]] sy ny ''Confédération des associations katangaises'' (Conakat) dia nitaky ny hananganana fanjakana kônfederaly.
Nisy ny latabatra boribory tany [[Brussel|Bruxelles]] nivorian’ ny mpitarika ny antoko pôlitika kôngôley sy ny olombe ara-drazana ary ny solontenan’ ny governemanta belza, tamin’ ny volana Janoary sy Febroary 1960. Tamin’izany no nandraiketana tamin’ ny 30 Janoary 1960 ny fahaleovan-tenan’ i Kôngô. Tsy nanapaka momba ny hisafidianana ny federalisma na tsia anefa ny Lalàna fototra nankatoavina taty aoriana.
=== Ny fitondran’ i Kasavubu ===
==== I Kasavubu no filoham-pirenena ====
Tamin’ ny volana Mey 1960, ny fifidianana, izay nahazoan’ ny MNC tarihin’ i [[Patrice Lumumba]] fandresena, dia nanome ny toeran’ ny filoham-pirena an’ i [[Joseph Kasavubu]], taorian’ ny fanambaràna ny fahaleovan-tena tao Léopoldville tamin’ ny 30 Jona 1960. Nihamaro ny herisetra, ary nikomy ny tafika kôngôley. Mba hamerenana ny filaminana sy hiarovana ireo Eorôpeana nitoetra tao Kôngô dia nanatevina ny tafika belza ny andian-tafika avy any [[Belzika]]. Neritreretin’ ny mponina ho fiverenan’ ny mpanjana-tany indray izany.
==== Ny fisaraham-bazan’ i Katanga ====
Nitombo ny korontana rehefa nanambara ny fahaleovan-tenan’ ny faritanin’ i Katanga i [[Moïse Tschombé]] izay notohanan’ ny ''Union minière'' ka nangataka ny fanampian’ ny miaramila belza, tamin’ ny 11 Jolay 1960. Namaly ny antson’ ny piraiminisitra Patrice Lumumba ny [[Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana|Filankevi-pilaminana]] (''Conseil de sécurité'') ao amin’ ny [[Firenena Mikambana]] ka nitaky ny hialan’ ny Belza sady nanapa-kevitra handefa ny Satro-manga (tafiky ny Firenena Mikambana) mba hamerina ny filaminana ao Kôngô. Nisolo miandalana ny tafika belza ny tafiky ny Firenena Mikambana nefa tsy niditra an-tsehatra mivantana. Noho izany dia nitodi-doha tany amin’ ny [[Firaisana Sôvietika]] i Patrice Lumumba.
==== Ny nahafatesan’ i Patrice Lumumba ====
Tamin’ ny 5 Septambra 1960 dia nanambara ny fanesorany an’ i Patrice Lumumba tsy ho piraiminisitra ny filoha Joseph Kasavubu. Tamin’ io fotoana io ihany koa no nanonganan’ i Patrice Lumumba an’ i Joseph Kasavubu. Ny tafika kôngôley notarihin’ i [[Mobutu Sese Seko]], izay mpomba an’ i Joseph Kasavubu, no naka ny governemanta. Tamin’ ny 29 Septambra 1960 dia namindra ny fahefany tamin’ ny governemanta vonjimaika notarihin’ i Mobutu Sese Seko i Joseph Kasavubu. Nosamborina sy nogadraina i Patrice Lumumba, avy eo novonoina tamin’ ny 17 Janoary 1961, tany amin’ ny faritanin’ i Katanga.
==== Fitsaharan’ ny fisaraham-bazan’ i Katanga ====
Tamin’ ny volana Janoary 1961 dia nanangana governemanta vonjimaika vaovao i [[Joseph Kasavubu]], ka nisy mpikambana avy ao amin’ ny Antenimiera taloha izany (isan’ izay i [[Joseph Ileo]] izay notendrena ho piraiminisitra). Ireo mpomba an’ i [[Patrice Lumumba]] kosa dia nanao toraka izany tany Léopoldville (ka i Gisega no piraiminisitra). Tamin’ ny faran’ ny taona 1961 dia namely ny tafik’ i Tschombé ny tafiky ny Firenena Mikambana sy ny tafika kôngôley. Nanao fifampiraharahana hampitsaharana ny ady eo amin’ ny tafika misatro-manga sy ny tafika katangey i [[Dag Hammarskjöld]] sekretera jeneralin’ ny Firenena Mikambana. Tamin’ ny Desambra 1962 dia voafehin’ ny tafiky ny Firenena Mikambana i Elisabethville. Nandositra tany Kolwezi i Tchombé. Nitolo-batana izy tamin’ ny 15 Janoary 1963 ary nahazo famelan-keloka miaraka amin’ ireo namany.
==== Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba ====
Nitsahatra ny fisaraham-bazan’ i Katanga, nefa nitohy ihany ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba. Tamin’ ny volana Aogositra 1964 dia nitarika ny mpioko tao atsinanan’ i Kôngô amin’ ny fanoherana i Pierre Mulele sy i Gaston Soumaliot, ka azon’ izy ireo i Stanleyville (Kisangani ankehitriny). Nandefa haingana ny andian-tafiny, izay nampian’ ny mpikaraman’ ady eorôpeana sy afrikana tatsimo, ny fanjakana ka niezaka namerina indray io tanàna io. Nisy mpilatsaka amin’ ny elonaina belza, izay nentin’ ny fiaramanidina amerikana, nilatsaka tao Stanleyville, ka nahazo indray ity tanàna ity tamin’ ny 24 Novambra 1964. Hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1968 dia niseho ny mpanao ady anaty akata niaraka tamin’ i Mulele, nefa nampiasa mpikaraman’ ady matetika ny tafika kôngôley mba hadresena azy ireo. Nisy anefa ireo fikambanana miafina mpanohitra izay tsy rava tao amin’ ny tangoron-tendrombohitra akaikin’ ny farihy Tangayika, ka isan’ izy ireo i [[Laurent-Désiré Kabila]].
=== Ny fitondran’ i Mobutu Sese Seko ===
==== Fanonganana an’ i Kasavubu sy fitondrana jadon’ i Mobutu ====
Taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny governementa iraisana dia nandray ny fitondrana i [[Mobutu Sese Seko]] tamin’ ny faran’ ny taona 1965, rehefa avy nanongana an’ i Kasavubu, ka nanambara ny tenany ho filohan’ ny Repoblika. Tamin’ ny taona 1966 dia nanangana governemanta jadona, izay ananan’ ny filoham-pirenena fahefana betsaka, izy sady antoko tokana no nekeny hisy, dia ny ''Mouvement populaire de la révolution'' (MPR). Izany fitondrana izany dia nohamafisiny tamin’ ny fampadaniana lalàm-panorenana vaovao tamin’ ny taona 1967.
==== Nanamafy ny maha filoha azy tamin’ ny fifidianana i Mobutu ====
Tamin’ ny taona 1970 dia lany ho filohan’ ny Repoblika mandritra ny fito taona i Mobutu ka nanomboka namerina an’ i Kôngô ho "tena afrikana sy ho tena izy" amin’ izay. Niteraka ny tsy fifanarahany tamin’ ny [[Fiangonana katôlika]] izany satria nasainy nesorina ny anarana kristiana ka nosoloiny anarana maha Kôngôley.Tamin’ ny taona 1971 dia nanova ny anaran’ i Kôngô ho Zaira (''Zaïre'') i Mobutu, ny renirano Congo koa dia novany ho ''Zaïre'', ny anaran’ ny tanàna maro sy ny anaran’ ny farihy Albert dia nantsoina hoe ''farihy Mobutu''. Ny ampahan’ io farihy io ao Oganda anefa tsy niova anarana.
==== Fitontogan’ ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsiana ====
Nihena ny fidiram-bolan’ i Zaira, izay niakina indrindra amin’ ny fitrandrahana [[varahina]], nanomboka tamin’ ny taona 1974. Tamin’ ny taona 1976 dia voatery niantso ireo orinasa vahiny hiverina any Kôngô i Mobutu. Na dia nisafidy ny fitondrana jadona aza i Mobutu dia nifandray tamin’ i [[Belzika]] sy i [[Frantsa]] izay nisakana ny fiverenan’ ny fisaraham-bazan’ ireo mpioko tao Katanga tamin’ ny taona 1977 sy 1978. Nanampy azy koa tamin’ izany i [[Marôka]] fa i [[Angôla]] no nanampy ny mpioko. Tamin’ ny taona 1986, rehefa tsy nanaraka intsony ny pôlitikan’ ny fitsitsiana i Zaira dia latsaka tanatin’ ny fahasahiranana ara-toekarena lalina.
==== Fihozongozonan’ ny fitondran’ i Mobutu ====
Tamin’ ny taona 1990 dia niseho matetika ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana nanoherana ny [[kolikoly]] nanjaka teo amin’ ny fitondrana, nanoherana koa ny fandrobana ny harem-pirenena nataon’ ny filohan’ ny Repoblika, nanoherana ny fanitsakitsahana ny zon’ olombelona mbamin’ ny [[demôkrasia]]. Rehefa noteren’ ny firenena tandrefana hampanjaka ny demôkrasia i Mobutu dia nanaiky hampanao fihaonambem-pirenena. Tsy nanaiky ny hanovana ny lalàm-panorenana vaovao anefa i Mobutu. Hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1994 dia nipoaka ny savorovoro sy ny fihetsiketseham-panoherana izay nofaizin' i Mobutu mafy. Nanomboka tamin’ ny taona 1994 dia nihatsara ny toe-draharaha, vokatry ny fifanarahana ny amin’ ny hitsinjarana ny toerana eo amin’ ny filoham-panjakana sy ny Filankevitra Ambonin’ ny Repoblika (''Haut conseil de la République''), izay nisahana vonjimaika ny asan’ ny Antenimiera.
==== Ny olana nateraky ny adin’ ny Hoto sy ny Totsy ====
Ny firohotry ny [[Hoto (vahoaka)|Hoto]] mpitsoa-ponenana miisa manodidina ny 1 500 000 avy any [[Roanda]], nanomboka tamin’ ny fiafaran’ ny taona 1994 teo amin’ ny sisin-tany ao atsinanan’ i Zaira, dia nanampy ny fikorontanana anatiny ao Zaira. Nandositra ny fitondrana totsy any [[Kigali]] ao [[Roanda]] mantsy ireo Hoto ireo. Niharatsy ny toe-draharaha nandritra ny fahavaratry ny taona 1996 rehefa niray hina hiady amin’ ny Totsy baniamolenge (''Banyamulenge'') ny tafika zairoà sy ny milisy hoto. Ireto Totsy mpiompy sady mpiady ireto dia nanampy ny FPR tamin’ ny ady tao Roanda. Niainga avy ao Roanda miaraka amin’ ny tafika roandey izy ireo ka nahazo fandresena miezinezina manoloana ny tafik’ i Zaira.
Ny mpitari-tafika roandey, indrindra ny jenaraly [[Paul Kagame]], dia nanao izay hampilamina ny raharaha ao amin’ ny tobin’ ny mpitsoa-ponenana nofehezin’ ny tompon’ andraikitra tamin’ ny fandripahana ny Totsy tao Roanda. Tamin’ ny tenantenan’ ny volana Oktobra 1996 dia niharan’ ny fanafihan’ ny Totsy zairoà mpioko, izay notarihin’ ireo mpiady taloha niaraka tamin’ i Mulele, ireo tobin’ ny mpitsoa-ponenana tao amin’ ny faritra manakaiky an’ i Bukavu. Nandritra ny fararanon’ ny taona 1996 dia nirohotra nankany Roanda ny mpitsoa-ponenana hoto.
==== Fidarabohan’ ny fitondrana tao Kisangani ====
Niainga avy ao amin’ ny sisin-tany atsinanana ny mpioko zairoà izay nahazo fitaovana tamin’ i [[Roanda]] sy tamin’ i [[Oganda]] ary tamin’ i [[Angôla]]. Nandroso nankany andrefana ka naka ny faritr’ i Goma, ny an’ i Bukavu ary ny an’ i Kisangani, sy nianatsimo koa izy ireo nankany amin’ ny faritra misy fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany any Katanga sy any Kasaï. Nikisaka haingana ny fikambanana izay nirafitra manodidina an’ i Kabila sy ny ''Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo'' (AFDL), ka nifehy ireo faritra navelan’ ny tafi-panjakana. Tsy nandray karama nandritra ny volana maromaro ny miaramila zairoà ka niala tao amin’ ireo faritra ireo sady nandroba ny tanàna maro nandalovany. Tsy afaka nanohitra i [[Mobutu Sese Seko|Mobutu]] rehefa tsy voafehiny intsony ireo faritra manana ny maha izy azy ireo.
Rehefa resy ny fitondrana tao Kisangani sady naongana i Kengo Wa Dongo, dia nanambara ny fananganana komity misahana ny fifampiraharahana i Mobutu Sese Seko. Manoloana ity tsy fifanarahana ity dia nisy firenena fito ambin’ ny folo ao amin’ ny Firaisambe Afrikana (OUA), izay nisahana ny fandaminana ny tsy fifanarahana, nanao fihaonana tampony tao Lome tamin’ ny volana Marsa 1997. Ny tafiky ny AFDL kosa nanohy ny fandrosoany mankany [[Kinshasa]]. Nitombo ny fanerena avy amin’ ny fianakaviambe iraisam-pirenena dia nanao izay hampihaonana an’ i Mobutu sy i Kabila ny mpanelanelana avy amin’ ny [[Firenena Mikambana]] sy i [[Etazonia]] ary i [[Afrika Atsimo]]. Tanteraka izany tamin’ ny 4 Mey 1997 teo ambonin’ ny sambo afrikana tatsimo iray, nefa samy niziriziry amin’ ny heviny ny mpifanandrina.
=== Ny fitondran’ i Laurent-Désiré Kabila ===
==== Fanonganam-panjakana sy ampihi-mamba ====
Tamin’ ny volana Mey 1997 dia niditra ao [[Kinshasa]] ny andian-tafiky ny AFDL ka nanambara ny tenany ho filoha ho an’ ny Repoblika vaovao i [[Laurent-Désiré Kabila]]. Izany repoblika izany dia nantsoiny hoe ''Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô'' (''Republique Démocratique du Congo''). Nandao an’ i Kôngô i Mobutu ka nitsoaka nankany [[Marôka]]. Nataon’ i Laurent-Désiré Kabila ampihi-mamba ny fahefana rehetra ka niteraka fanoherana avy amin’ ireo mpanohitra an’ i Mobutu taloha. Nisy koa mpomba an’ i Mobutu taloha izay nitsangana ka nanohitra azy.
==== Tompon’ antoka tamin’ ny fandripahana ny Hoto ====
Nanda ny hanaovan’ ny [[Firenena Mikambana]] fanadihadiana momba ny fanjavonan’ ny [[Hoto (vahoaka)|Hoto]] miisa 200 000 tao amin’ ireo ala atsinanana i Laurent-Désiré Kabila. Ny tatitry ny Firenena Mikambana, izay nivoaka tamin’ ny taona 1998, dia niampanga ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô sy i [[Roanda]] ho nahavanona heloka bevava amin’ ny maha olona. Niteraka fankahalana ny [[Totsy (vahoaka)|Totsy]] ao Kôngô ny fanjakazakan’ ireo Roandey nanampy an’ i Kabila. Noho izany, tamin’ ny volana Jolay 1998 dia nanaisotra minisitra maro i Kabila sy niangavy ny andian-tafika ogandey sy roandey mba handao an’ i Kôngô.
==== Fikomian’ ny Totsy baniamolenge ====
Fotona kely taty aoriana dia nikomy ireo [[Totsy (vahoaka)|Totsy]] baniamolenge izay nanampy an’ i Kabila tamin’ ny fakana ny fitondrana, ka nandrahona ny haka ny renivohitra sy ny seranan-tsambon’ i Matadi. Tamin’ izany fotoana izany dia nanenjika ny andian-tafi-panjakana ao Kivu ny mpitari-tafika roandey James Kabare sady nanohy ny fampijaliany ny mpitsoa-ponenana hoto. Nangataka fanampiana tamin’ i [[Zimbaboe]], tamin’ i [[Tsady]], tamin’ i [[Namibia]], tamin’ i [[Sodàna]] ary indrindra tamin’ i [[Angôla]] i Kabila. Nitsimbadika ka namely ny mpioko manohitra azy (ny ''Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola'', UNITA) tamin’ ny fotoana nanavotany an’ i Kinshasa i Angôla.
Na dia teo aza ny ezaka fampihavanana nataon’ i Zimbaboe dia tsy nisy niova hevitra ny mpifanandrina. I Arthur Z’Ahidi Ngoma, izay mpandrindra ny fiokoana hatramin’ ny taona 1998, avy eo i Ernest Wamba dia Wamba, izay samy Kôngôley lohandohany ao amin’ ny ''Rassemblement congolais pour la démocratie'' (RCD) dia niala an-daharana, ary nanambara i [[Oganda]] fa hampody ny andian-tafiny. Tamin’ ny vaolana Jolay 1999 dia nifanaraka tao [[Lusaka]] any [[Zambia]] ny firenena enina (i Angôla, i Namibia, i Zimbaboe, ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, i Roanda ary i Oganda), izay nandray anjara tamin’ ny ady, fa hampitsahatra an’ izany ady izany.
==== Fanirahana ny MONUC hiantoka ny fampitsaharana ny ady ====
Nifanarahana tamin’ izany ny handefasana ny ''Mission des Nations unies en République démocratique du Congo'' (MONUC), izay nahitana miaramila misatro-manga miisa 5 500, niandraikitra ny fanamarinana ny fiatoan’ ny ady.
Satria ny antony lehibe nahatonga ny ady dia ny fifehezan’ ny fikambanana mpioko ny akora fanodina (indrindra ny [[diamondra]]), dia samy niziriziry amin’ ny heviny ny mpifanandrina. Na dia ireo firenena mpinampana aza dia nisy fotoana nifamelezana koa (ohatra ny ady matetika tao Kisangani nifamelezan’ i Oganda sy i Roanda).
=== Ny fitondran’ i Joseph Kabila ===
==== Fiakaran’ i Joseph Kabila teo amin’ ny fitondrana ====
Nanangana governemanta vaovao tamin’ ny volana Avrily 2001 i Joseph Kabila ary tsy nampidiriny amin’ izany ireo olona akaiky ny rainy. Nanambara ny fankasitrahany ny hisian’ ny fifidianana amin’ ny fotoana tsy ela araka izay azo atao izy. Nitohy ny fifampiresahana teo amin’ ny samy Kôngôley taorian’ ny tsy fahombiazan’ ireo fihaonana tany [[Addis Ababa|Addis-Abeba]] tamin’ ny volana Ôktôbra 2001.
Taorian’ ny fialan’ ny tafika rehetra avy any ivelany (Roanda, Oganda, Angôla, Namibia ary Zimbaboe) tamin’ ny taona 2002 dia nandroso tokoa ny fizorana mankany amin’ ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanam-pirenena tamin’ ny volana Desambra 2002, taorian’ ny fifanarahana nosoniavina tany [[Pretoria]] momba ny fitondrana tetezamita ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Novitaina tamin’ ny volana Avrily 2003 ny fifanarahana, izay namporisihin’ ny filoham-pirenena [[Thabo Mbeki]]. Taorian’ ny famoahana ny lalàm-panorenana vaovao dia natsangan’ i Joseph Kabila ny governemanta tetezamita tamin’ ny volana Jolay 2003, izay nahitana solontena avy amin’ ny ''Rassemblement congolais pour la démocratie'' (RCD) notarihin’ i Azarias Ruberwa, avy amin’ ny ''Mouvement de libération du Congo'' (MLC) notarihin’ i Jean-Pierre Mbemba, avy amin’ ny mpanohitra tsy mitam-piadiana ary avy amin’ ny fiarahamonim-pirenena.
Nitohy ny fifanandrenana tao amin’ ny faritra atsinanana vokatry ny disadisa ara-poko teo amin’ ireo andian’ olona mitam-piadiana. Rehefa nody ny tafika ogandey dia nisy ny fifandriganam-poko vokatry ny fifanandrinan’ ny milisy Hema sy Lendu manodidina ny tanànan’ i Bunia ao Ituri. Nitombo ny herisetra ka tonga ny tafika iraisam-pirenena notarihin’ i [[Frantsa]] sy nomen’ ny [[Firenena Mikambana]] alalana mba hiaro ny mponina. Nosoloana miaramila avy ao amin’ ny Satro-manga ity tafika iraisam-pirenena ity taty aoriana. Izany tafiky ny Firenena Mikambana izany dia nomena ny anarana hoe ''Mission des Nations Unis au Congo'' (MONUC), izay nahitana miaramila miisa 17 000.
==== Fahalanian’ i Joseph Kabila voalohany ====
==== Fahalanian’ i Joseph Kabila fanindroany ====
Nandray ny toerana maha filohan’ny Repoblika azy i Joseph Kabila tamin’ ny 6 Desambra 2006. Nitohy ihany anefa ny ady, indrindra tao amin’ ny faritr’ i Kivu. Ny ''Forces démocratiques de libération du Rwanda'' (FDLR) dia nanohy nandrahona ny sisintany roandey sy ny Baniaroanda. Nanohana ny mpiokon’ ny ''Rassemblement congolais pour la démocratie'' (RCD-Goma) izay nanohitra ny fitondrana tao Kinshasa.
Tao amin’ ny tapany avaratr’ i Katanga dia tsy voafehin’ ny fitondrana ny milisin’ i Laurent-Désiré Kabila izay nampiadin’ ity filoham-pirenena ity tamin’ ny milisy roandey, nefa tsy nampandraisina anjara tamin’ ilay fifanarahana tao Lusaka tamin’ ny taona 1999. Hatramin’ ny volana Novambra 2010 dia nohatanjahina ka lasa ''Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo'' MONUSCO ny MONUC.
Tamin’ io volana io ihany dia voatosiky ny tafika kôngôley avy ao amin’ ny tendrombohitra ao Nord-Kivu ny mpioko M23 izay tsy niady intsony sady nandrava ny fikambanany tamin’ ny 3 Desambra 2013 tamin’ ny alalan’ ny fifanarahana nosoniavina tao [[Nairobi]]. Tamin’ ny taona 2016 dia nisy ny diasadisa tamin’ ny hirosoana amin’ ny fifidianana amin’ ny taona 2016 noho ny mety hanampian’ i Joseph Kabila 16 volana ny fotoam-pitondrany. Nisy ny fihetsiketseham-pikomiana tamin’ ny faritany maro.
=== Ny fitondran’ i Félix Tshisekedi ===
Tanteraka tamin’ ny 30 Desambra 2018 ny fifidianana ary tamin’ ny 10 Janoary 2019 ny filohan’ ny CENI Corneille Nangaa dia nanambara ny maha filohan’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô an’ i [[Félix Tshisekedi]]. Nanao fianianana tao amin’ ny Palais de la Nation ny filoham-pirenena tamin’ ny 24 Jaoary 2019.
Niaraka tamin’ ny antokon’ i [[Joseph Kabila]], izay lasa loholona mandra-pahafatiny, i Félix Tshisekedi tamin’ ny fanaovana fampielezan-kevitra. I Martin Fayulu, mpifanohitra aminy matanjaka indrindra, izay nitarika vonjimaika tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena, dia nanaiky ny voka-pifidianana. Tsy nandray ny fitoriana nataony ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana (''Cour constitutionnelle''). Vokatr’ izany fiarahan’i Félix Tshisekedi amin’ ny antokon’ ny Joseph Kabila izany dia marin-toerana ny fitondrany, noho ny nahazoan’ io antoko io toeran’ ny solombavam-bahoaka miisa 337 amin’ ny 500.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/998453"